Adigoo adeegsanaya gacmo -gacmeed Railing Handrail ACE oo casri ah oo casri ah si aad aragtidaada ugu saarto xarrago, Waxaa lagu dhisay kaliya alaab tayo sare leh, alwaaxdeena iyo biraha gacmaheena waxay bixiyaan khadad nadiif ah iyo carqalad yar. Baalashyada, kala -goysyada, iyo agabka dhejinta ayaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey inay xoogga saaraan quruxda kugu xeeran, ee ma aha qalabka.
Taayirada dhalada ee adag waa nidaam meesha muraayadaha muraayadaha lagu hubiyo istaag (wareegyada/ dhululubada birta aan birta lahayn). Muraayadu waxay leedahay daloollo hore loo qoday, waa la simay, oo meelaha la isku hayaa waxay ku sugaan guddida wejiga toosan ee jaranjarada iyo nidaamka dabaqa. Kani wuxuu noqon karaa nidaam tareen oo aan lahayn oo leh qaddar yar oo qalab muuqaal ah.